Ubuntu Touch OTA-14 dia misy fivoarana lehibe amin'ny fakan-tsariny | Ubunlog
Ubuntu Touch OTA-14 tonga miaraka amin'ny fanatsarana manan-danja ao amin'ny fakantsary ary mamela antsika haka sary
Nandritra ny fotoana lava be dia naniry ny hanandrana ny Ubuntu Touch aho, ary ny fomba tsara indrindra hanaovana izany, hoy aho, dia ny mividy ny PineTab. azoko, Efa nanandrana ny Ubuntu Touch aho ary nanamarina fa manana jiro sy aloka izy. Saingy rehefa nividy ilay takelaka PINE64 aho ary niditra tao amin'ny vondrona fifanakalozan-kevitr'izy ireo, dia mahatsikaiky ny mahita ny fomba tsy maintsy fakana sary ny fitaovana ahafahanay mandefa ny zava-mitranga. Tsy ilaina intsony izany aorian'ny fandefasana ny OTA-14 avy amin'ny Ubuntu Touch.
Heveriko fa misy zavatra tsy misy fahasoavana. Efa herinandro maromaro izay, angamba iray volana mahery, dia nilaza tamiko izy ireo fa efa nanomana a script izay ahafahantsika maka pikantsary natiora amin'ny fitaovana izay tsy nosarahana ny bokotra volany, toy ny PineTab, izay tsy nahafahana nampiasa ny fomba natoraly. Mba hanaovana izany, ny script dia nanisy "bokotra" vaovao izay miseho rehefa tsindrio ny bokotra fanakatonana mandritra ny iray segondra, ary amin'izany bokotra izany dia afaka maka pikantsary isika. Inona no hitako mahatsikaiky? Ny tsy ahafahanao manao pikantsary amin'ny menio handraisana ny pikantsary, mba hahazoana ny sary etsy ambany amin'ireo andalana ireo dia tsy maintsy nampiasa ny rafitra taloha aho: sary.
Araka ny vakiantsika ao amin'ny naoty famoahana, ny miavaka indrindra amin'ny OTA-14, izay tsy mifanaraka amin'ny fitaovana PINE64 ny anarany, dia ireto manaraka ireto:
Hita ihany koa ao amin'ny Xiaomi Redmi 4X, Huawei Nexus 6P, Sony Xperia Z4 (takelaka).
Nifantoka tamin'ny fanohanana ny Android 9 izy ireo, amin'ny ampahany hanampiana ny Volla Phone.
Raikitra ny olana fanidiana apps amin'ny alàlan'ny fanodinana azy ireo
Fanohanana nohatsaraina ho an'ny fakantsary, saingy, mbola tsy mandeha amin'ny PineTab.
Ny fanohanana ivelany dia miasa miaraka amin'ny HardwareComposer2.
Nisy ny fanovana natao tamin'ireo fifandraisana sy hafatra fampiharana hahamora kokoa ny fampiasana azy ireo.
Ny efijery fampidirana ho an'ny kapila ivelany dia mifanaraka amin'ny endrik'ireo fampiharana hafa.
Nanampy bokotra iray hakana pikantsary amin'ny bokotra herinaratra. Io dia mamela ny fakana sary tsy misy fitendry, ary koa ho antsika izay manana fitaovana misy bokotra volume izay tsy azo tsindriana miaraka, toy ny PinePhone sy PineTab.
Fiatoam-pifandraisana Bluetooth namboarina, izay mety hitranga amin'ny tranga maro samihafa, toy ny rehefa mampifandray ilay fitaovana amin'ny rafitra audio audio an'ny fiara.
Ny Ubuntu Touch OTA-14 efa navotsotra tao amin'ny fantsona marin-toerana, Ka raha hametrahana azy dia tsy maintsy manokatra ny rindranasa fikirakirana fotsiny isika, mankanesa any amin'ilay faritra fanavaozana ary apetraho ilay kinova vaovao izay efa miandry antsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ubuntu Phone » Ubuntu Touch OTA-14 tonga miaraka amin'ny fanatsarana manan-danja ao amin'ny fakantsary ary mamela antsika haka sary
Ny KDE Applications 20.08.3 dia tonga miaraka amin'ny fanamboarana farany ho an'ity andiany ity
IceWM 1.9 dia miaraka amin'ny fanatsarana ny fikarohana, ny debugging ary maro hafa